Miaramila Amerikana Namoaka Vaovao Tany Amin’ny WikiLeaks · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2013 21:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Català, Français, English
Nohenoina nandritra ny fitsarana ara-miaramila natao azy ilay miaramila Amerikana sady mpampianga, Bradley Manning tamin'ny herinandro lasa teo mba hanazava amin'ny fiteniny manokana, ny antony nahantonga azy namoaka tahirin-kevitra miaramila saropady an'arivony tao amin'ny habaka WikiLeaks. Eto no ahitana dika tsy ofisialin'ny fijoroana vavolombelona izay narakitr'ilay mpanao gazety Alexa O’Brien. Nilaza tamin'ny fitsarana i Manning fa nanapa-kevitra namoaka ireo tahirin-kevitra ireo ho an'ny media izy satria nampanahiran-tsaina azy tanteraka izany [tahirin-kevitra] mikasika ny asa ataon'ny miaramila Amerikana mandritra ny ady ao Irak sy Afghanistan.
Nandritra ny fakana ambavany, nanolotra taratasim-piarovana manoloana ireo fiampangana am-polony hanenjehana azy ny ekipa mpisolo vava an'i Manning, anisan'izany ny fiampangana madinika marobe momba ny fahazoana vaovao. Amin'ireo fiampangana folo, mety hahazo sazy 20 taona an-tranomaizina farafahabetsany i Manning.
Tamin'ny fijoroana vavolombelona teo anatrehan'ny fitsarana, afaka nilaza ny marina momba ny famoahana ireo tahirin-kevitra tamin'ny WikiLeaks i Manning ary nanazava ny antony nanaovany izany. Namariparitra ny fahatahorany sy ny ahiahiny mikasika ny asa ataon'ny Miaramila Amerikana i Manning araka ny fijeriny amin'ny maha-Tafika Mpanadihady azy. Naneho hevitra mombanà lahatsary izay ho fantatra atsy ho atsy amin'ny anarana hoe Collateral Murder (Famonoana Havana Akaiky), izay mampiseho ireo miaramila Amerikana mitifitra ireo mpanao gazety Reuters roa sy olo-tsotra maromaro tsy manana fitaovam-piadiana izy, hoy i Manning nilaza tamin'ny fitsarana:
Namariparitra izay antenainy ho vitany tamin'ny famoahana tahirim-baovao momba ny ady ao Irak sy Afghanistan i Manning – tahirin-kevitra tafaporitsaka izay ho fantatra amin'ny GAzety momba ny Ady ao Iraka sy Diary momba ny Ady ao Afghana:
In-telo Voatendry tamin'ny Loka Nobel, ary efa nigadra teo amin'ny telo taona teo i Manning niandry ny fanombohan'ny fitsarana ara-miaramila azy. Niatrika fitsarana ara-miaramila taminà fotoam-pitsarana samihafa teo aloha izy izay namaritana mikasika ny fomba itondrana ny raharaha hanenjehana azy ny sy ny fomba hitsarana azy. Anisan'izany ny momba ireo vavolombelona afaka ekena hijoro, ny porofo tokony atolotra, sy ireo atontan-kevitra hodinihan'ny fitsarana.
Ny fanontaniana tena lehibe amin'ity raharaha ity dia ny hahafantarana raha nisy fiantraikany tamin'ny Fiarovam-pirenena Amerikana na tsia ny famoahan'ny WikiLeaks ireo vaovao izay navoakan'i Manning. Taorian'ny adim-pitsarana naharitra volana maromaro, afaka nahazo ireo tati-pikarohan'ny governemanta momba ity olana ity ny ekipa mpisolo vavan'i Manning. Na dia izany aza, nanapa-kevitra ny mpitsara ny raharahan'i Manning fa na dia niantraika tamin'ny Fiarovam-pirenena aza ny famoaham-baovao, tsy azo sokajiana ho zava-mifanaraka amin'ny fandinihana ny fahamelohan'i Manning izany.
Indrisy anefa, noferan'ireo manampahefana ny fahazoan'ny olona manatrika ny fotoam-pitsarana. Nandà tsy hanome dika ofisialy tamin'ny fakana am-bavany azy ho an'ny olona ny miaramila, ary voaràra ihany koa ny fitantarana mivantana ny fotoam-pitsarana (na amin'ny alalan'ny Twitter na bilaogy, ohatra). Mahasosotra tokoa izany satria ireo fandehan-draharaha, tahaka ny fitsarana ara-miaramila amin'ny ankapobeny, dia tokony azon'ny olon-drehetra hatrehina sy tantaraina.
Fantatra fa amin'ny 3 Jiona 2013 izao no hanombohana ny fotoam-pitsarana an'i Manning. Mikarakara hetsika ireo fikambanana mpikatroka amin'ny 1 Jiona 2013 mba hanehoana fanohanana an'i Manning. Tsidiho ny www.bradleymanning.org raha te hahafantatra bebe kokoa.